Ibsa Ijjannoo koree Godina Canada fi USA /North Ameerika/ABO jijjirama irra – Welcome to bilisummaa
Ibsa Ijjannoo koree Godina Canada fi USA /North Ameerika/ABO jijjirama irra
Jaarmiyaan keenya ABOn Jijjirama Hagayaa 2,2015 ibsaa baseen Maqaa dhaabaa
keenya , Saganta Siyasaa , Alaabaa Dhaabaa , asxaa dhaabaa, maqaa worranaa fi kkf
osoo miseensoni bakka hunda mormma jiraan ABO irra kara KWO jedhuutti geedaruun
labsaa basu isaa dhageenye itti gadine jira.
Akkuma beekamu ABOn jaarmiyaa seena qabseesa dhiga fi lafee gotowwaan
kumataamtiin dhabate yoo tahu maqaan dhaabaa kanaa akka amma sabbaa gayaa tokko
malee namoon seena dhaba kana sirritti hin hubanne oluma kani jijjiree jedhan labsaan
kanatti maqaa jijjiramu tahu mitti.
Yeroo amman tana ilman oromoo biyyaa keesa kumatamaan maqaa dhaaba kanatiin
himatamuun murttiin du’aa itti murtayee yakka tokko malee manoota hidha woyyaannee
keesa guutani jiru.
Nutti akka koree Godiina Candaa fi USAti mormii miseensota keesa jiru osoo itti himinu
nama nudhagayyuu waan dhabineef jecha konyaleen arman gaadi maqaan teerfamee
ibsaa ABOn jijjirama G/Kamal Galchu amma base kana moriminne jirra,
1} Konya Toronto, Canada
2} Konya Edmonton, Canada
3}konya Calgary, Canada
4} Konya Minesota, USA
5} konya Seattle, USA
6} Konya Iowa, USA
7} Konya DC, USA
Ibsaa tokkummaa oromoo diguuf godhamee kana ni mormina.
ABO jaarmiyaa dhigaa gootoota ilmaan oromoo kumatamaan dhabatte yoomu digamu !
Injjifanoon ummata Oromoof !
Koree Godiina Kanadaa fi USA ABO jijjirama.
Previous Koreen hojii raawwachiiftuu ABO teessuma taasifateen jabinaa fi hanqinoota dhaaba keenya mudatan eega qoratee booda jabina akka dhaabaatti qabnu jabeeffa..
Next ABO – AWO – Jijjiirama – ADO – KWO – ??? fi THBO